स्टाफले भने तलब दिदै आ'त्मह'त्याको ३ दिन अघि सुशान्तले अब तलब दिन म न'हुन पनि सक्छु भनेका थिए ! - Filmy News Portal Of Nepal
स्टाफले भने तलब दिदै आ’त्मह’त्याको ३ दिन अघि सुशान्तले अब तलब दिन म न’हुन पनि सक्छु भनेका थिए !
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृ’त्युको बिषय अहिले च’र्चामा छ । अभिनेता सिंह यहि जुन १४ मा मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा मृ’त अवस्थामा फे’ला परेका हुन । सुशान्तको नि’धनका लागि बलिउडको नातावा’द जि’म्मेवार रहेको भन्ने बहस समेत अहिले च’र्चा छ । सलमान खान लगायतका कलाकार वि’रुद्ध प्रहरीमा उ’जुरी समेत परेको छ ।
सुशान्तको मृ’त्यु हुँदा कुनै ‘सु साइड नोट’ समेत फे’ला न’परेकाले घ’टना र’हस्यमय बनेको हो । १६ बर्षको उमेरमै आमा गु’माएका सुशान्त परिवार देखि टा’ढा थिए । उनको परिवार पटनामा थियो भने उनी आफैले मुम्बईमा किनेको घरमा ए’क्लै बस्दै आएका थिए । सुशान्तले घरमा काम गर्न स्टाफहरु राखेका थिए ।
उनको मृ’त्युको खबर पनि स्टाफले नै प्रहरीलाई जानकारी दिएपछि बाहिरिएको थियो । सुशान्तले मृ’त्युको ३ दिन अघि घरका सबै स्टाफलाई बोलाएर तलब दिएको खु’लेको छ । भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रहरीको स्रोतलाई उ’दृत गर्दै सुशान्तले मृ’त्युको ३ दिन अघि सबैलाई स्यालरी दिएको जनाएको छ ।
स्यालरी दिँदै सुशान्तले भनेका थिए ‘राख्नुस् सायद अब स्यालरी दिन पाउने छैन् । सुशान्तको मृ’त्यु उनकी पूर्व म्यानेजर दिशा सलियनले घरको १४ औंबाट तल हा’म फा’लेर आ त्मह त्या गरेको १ हप्तापछि भएको थियो । एक वेव सीरिजका लागी सुशान्त पूर्व म्यानेजरसँग सम्पर्कमा रहेको कुरा पनि बाहिरिएको छ ।
करण जोहर, संजय लीला भन्साली, दिनेश विजान लगायत धेरै कलाकारका कारण कामबाट ल’खेटिएकाले पनि वि’चलित भएका सुशान्तले यस्तो क’दम चा’लेको भन्ने चर्चा समेत हुने गरेको छ । ती कलाकार वि’रुद्ध प्रहरीमा उ’जुरी परेपछि प्रहरीले अ’नुसन्धान गरिरहेको छ । – एजेन्सी